webdev, Author at BFI Education Services - Page4of 19
KG teachers and the KG students went Botahtaung Harbor
This week KG teachers and the KG students went to Botahtaung Harbor. This day is such an exciting day for the kids. Our kids had the opportunity to visit the Yangon Water Bus. Big thanks must go to all KG teachers who helped out on the day and of course to Yangon Water Bus for...
November 5, 2018November 5, 2018by webdev
Download registration forms for our Table Tennis tournament here: https://mega.nz/… (English) in Burmese https://mega.nz/… (Burmese
Year 9P and Year8S Students’ Donation
Year 9P and Year8S Students’ Donation to Shwe Gone Dine Residential Nursery
How Cooking Can Help Preschoolers?
How Cooking Can Help Preschoolers??? Spending time in the kitchen and cooking new recipes helps children to developapositive connection to all different types of foods including fruits and vegetables. Children learn by touching, tasting, feeling, smelling, and listening. They love activities in the kitchen because they can use all their senses. Getting involved...
November 1, 2018November 1, 2018by webdev
Sharing is caring! Year2Students’ donation at Hearing Disabled School, Tamwe.
October 24, 2018October 24, 2018by webdev
SKT ကျောင်းသား/သူများ သီတင်းကျွတ်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို သရုပ်ဖော်တင်ဆက်
SKT International College ကျောင်းသား/သူများမှ သီတင်းကျွတ်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများအား သရုပ်ဖော်တင်ဆက်ပြသသည့် အခမ်းအနားကို ယနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
October 19, 2018October 19, 2018by webdev
BISA Secondary Science Week (October 15 to 17)
BISA Secondary Science Week (October 15 to 17) Learning by hands-on activities.Our little scientists demonstrated the experiments to their parents with joy,excitement and enthusiasm. လက်တွေ့လုပ်ဆောင်၍ သင်ယူခြင်း။BISA ကျာင်းမှ သိပ္ပံပညာရှင်ကလေးများသည် သိပ္ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို မိဘများအား ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ပြသခဲ့သည်
Let’s have fun with cooking!
Let’s have fun with cooking! Cooking offersaspecial treat for children – it allows them to do things that adults do. With all the adult things children aren’t allowed to do, it’s very rewarding for them to be encouraged to cook “just like grown – ups”. ‘ပျော်ရွှင်စွာ ချက်ပြုတ်ကြရအောင်̕ ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ကလေးများအတွက်ထူးခြားသောခံစားမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။မိဘများသည် လူကြီးများ၏အလုပ်များကို ကလေးများအားပေးလုပ်လေ့မရှိပါ။ကလေးငယ်တို့အားအရွယ်ရောက်ပြီးသုများကဲ့သို့ချက်ပြုတ်ရန်အားပေးစေခြင်းသည် ဆုလာဒ်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
October 18, 2018October 18, 2018by webdev
ကလေးများအတွက် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်မည်
လူကြီးမင်းတို့၏ ကလေးများအတွက် စနေ၊တနင်္ဂနွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ အကျိုးရှိမယ့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကောင်းကောင်းကို Bahan International Science Academy မှာ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ ၂၇ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ အထိ ဒုတိယအကြိမ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါပြီ။အသက် ၆နှစ် မှ ၁၈နှစ် အတွင်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ အချိန်မရွေး အမြန်ဆုံး လာရောက် စာရင်းသွင်းတက်ရောက်နိုင်ကြပါပြီ။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာ ဆရာမများမှ Cambridge သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အခြေခံ၍ Starters,Movers,Flyers, KET, PET တို့ကို အောင်မြင်ထူးချွန်စွာ ဖြေကြားနိုင်မည့် Course Book များဖြင့် သင်ကြားပေးနေပါပြီ။ ထို့အပြင် ကလေးများ၏ အင်္ဂလိပ်စာ အပြောစွမ်းရည်၊အကြားစွမ်းရည်၊စာဖတ်စွမ်းရည်၊အရေးစွမ်းရည်၊စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်မှု၊မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု၊တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု စသော စွမ်းရည်များကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးနေပါပြီ။ အသေးစိတ်...